अझै पाँच पालिकाको नतिजा आउन बाँकी - Aarthiknews
मंगलबार, २१ असार २०७९ Tuesday, 05 July, 2022
काठमाडौं । स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भएको १२ दिन पुगे पनि अझै ५ पालिकाको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक हुन सकेको छैन । निर्वाचन आयोगका अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिका, रौटहटको गरुडा र फतुवा विजयपुर नगरपालिका र उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाको मतगणना भइरहेको छ ।
बाजुराको बूढीगङ्गा नगरपालिकामा अझै मतगणना सुरु हुन सकेको छैन । निर्वाचन आयोगका अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र साह ४८ हजार ४३२ मतसहित अग्रस्थानमा छ । उनको प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका सिर्जना श्रेष्ठले ३० हजार ३९७ मत प्राप्त गरेका छन । यस्तै उपप्रमुखमा नेकपा ९एमाले०का सुनिता डङ्गोलले ५३ हजार ६४२ मत प्राप्त गर्दा नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० का रामेश्वर श्रेष्ठले १७ हजार ७५६ मत प्राप्त गरेका छन ।
उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाको प्रमुखमा एकीकृत समाजवादीका बलदेव चौधरी ७४४ मतसहित अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ । प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका वसन्तकुमार बस्नेतले ३४४ मत प्राप्त गरे । उपप्रमुखमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का गीता खड्का कार्कीले ८१८ मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका सरिता राईले ३२० मत प्राप्त गरेका छन ।
रौतहटको गरुडा नगरपालिकको प्रमुखमा एमालेका कन्थमनी प्रसाद कलवार तीन हजार ८०७ मतका साथ अगाडि छन । उनलाई एकीकृत समाजवादीका वृजकिशोर प्रसाद यादवले तीन हजार ४१८ मतका साथ पछ्याइरहेका छन ।
उपप्रमुखमा कांग्रेसका पुनमकुमारी चौधरीले पाँच हजार १४८ मत प्राप्त गर्दा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका विन्दुकुमारी देवीले तीन हजार १६४ मत प्राप्त गरेका छन ।
रौतहटकै फतुवा विजयपुर नगरपालिकाको प्रमुखमा कांग्रेसका गोपाल राय यादवले चार हजार ११७ मत प्राप्त गरी अग्रता लिइरहेका छन । एमालेका विजय यादव दुई हजार ९२२ मतका साथ पछि छन। उपप्रमुखमा कांग्रेसका अमवेया खातुनले चार हजार २५१ मत र एमालेका कान्ती देवीले तीन हजार २७० मत प्राप्त गरेका छन ।
सार्वजनिक भएको मतपरिणामअनुसार नेपाली कांग्रेस १३८ नगरपालिका र १८८ अध्यक्षसहित ३२६ स्थानमा विजयी भएको छ । जारी मतगणनामा कांग्रेस दुई स्थानमा अगाडि छ । एमाले ८१ नगरपालिका र १२३ गाउँपालिकासहित २०४ स्थानमा विजयी भएको छ । माओवादी केन्द्र २५ नगरपालिका र ९६ गाउँपालिका गरी १२१ स्थानीय तहमा विजयी भएको छ ।
बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकाद्वारा ४५ करोडको बजेट सार्वजनिक
‘बिचौलिया प्रयोग गरेर बनाईएको बजेटबारे छानबिन हुनैपर्छ’
राज्य र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यले मात्र समृद्धि सम्भव छः वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकाल
मधेस प्रदेशमा पुनः ‘छोरी शिक्षा बीमा’ शुरु
निर्वाचनप्रति सर्वसाधरणको चासो बढ्दो, यी स्थानबाट पाइन्छ मतदाता नामावली भर्न र सच्याउन
विपद्पीडितलाई बीमा रकम भुक्तानी
बजारमा तरकारी किन्न जाने तयारीमा हुनुहुन्छ ? यस्तो छ आजको भाउ
कलेजहरुको अपग्रेडिङ बापत प्रति कलेज ७ लाखसम्म लिन्छन् सदस्य सचिव काफ्ले
आयल निगम कसको कारण टाट पल्टिदैछ ?
मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर बढ्ने र आयात प्रतिबन्ध पनि थपिने
खरीद नियमावली १२ औं पटक संशोधन, यस्ता छन् प्रावधान
रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले मर्ज र पुँजी वृद्धि गरोउन सम्पूर्ण अख्तियारी बोर्डलाई दियो
बक्यौता नै ३० अर्ब पुगेपछि अफ्ठेरोमा आयल निगम
जसपामा आज औपचारिक विभाजनको घोषणा हुँदै
प्रधानमन्त्री देउवाले गरे मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, तीन मन्त्री थपिए
अन्ततः घटेर बन्द भयो नेप्से, कारोबार रकममा भने उछाल
भारतीय विमान कम्पनी इन्डिगोमा सरकारी रोग सर्यो
विदेशी विनिमय अपचलन गरेको आरोपमा एक जनाविरुद्ध मुद्दा दायर, ८ करोड २३ लाख माग दाबी
फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो, 'इण्डियन आयल कर्पोरेशनको बाँकी भुक्तानी गर्न नसक्ने भएपछि मूल्य बढ्यो'
फ्रक्सजबले सुरु गर्यो एकेडेमिक पार्टनरसिप प्रोग्राम
नेपालमा पहिलो पटक ओमिक्रोन भेरियन्टको नयाँ प्रजातिको फेला
शिवम् होल्डिङ्गस कम्पनी पब्लिक लिमिटेड कायम भई कारोबार गर्ने
कति छ आज सुनचाँदीको भाउ ?
असार २७ गतेदेखि एकिकृत कारोबार गर्दै नबिल र नेपाल बङ्गलादेश बैंक
राज्यले गर्न नसकेको काम सहकारीले गरेको छः गृहमन्त्री खाण
मेगा म्युचुअल फण्ड १ को नोक्सानी बढ्यो
लघुजलविद्युतकाे भविष्य अन्धकारमा
सोह्र सडक योजनालाई १८ करोड बजेट
भोजपुरमा आम्दानीको स्रोत बन्दै अकबरे खुर्सानी
इन्धनको मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता नभए पर्यटन श्रमिकहरु सडक संघर्षमा उत्रने
महालक्ष्मी विकास बैंकद्वारा नयाँ बचतखाता सार्वजनिक
वैदेशिक रोजगारीमा ठगी: विचौलियाले न पठायो, नत रकम नै फिर्ता गर्यो